प्रत्यक विवाहित श्रीमान श्रीमतीले पढ्नै पर्ने कथा, यदि तपाई बिबाहित हुनुहुन्छ भने अबस्य पढ्नुहोला !!
- नेपाली सन्देश बिहिबार, बैशाख २०, २०७५ , 7.9K जनाले हेर्नुभयो
दिनहरू बित्दै गए । रमेश र निशा आ-आफ्ना काममा व्यस्त रहन्थे । गाउँघरमा शिक्षित महिलाको अभाव भएकोले कुनै पनि संघ-संस्थाले आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी हुन निशालाई अनुरोध गर्दथे ।
निशा पनि अफ्नो व्यस्त समयको बाबजुद पनि सामाजिक कार्यमा आफूलाई सहभागी गराँउथिन् । उनी समाजमा रहेर केही परोपकारी काम, सेवा गर्न पाउँदा आनन्दको महशुस गर्थिन् । पछि गएर यो एउटा नशाको रुपमा विकसित हुनपुग्यो ।
उनलाई डर यो थियो कि निशाको यस्ता कार्यहरूले बाहिरी व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्दै जाने र आफूलाई बिर्सन सक्ने सम्भावना प्रवल रहला । शारीरिक रुपमा पनि निशा निकै सुन्दर थिइन् । यसले गर्दा रमेशमा शंकालु बानीको बिजारोपण भएको थियो भन्दा असान्दर्भिक थिएन ।
“रमेश दाइ भाउजू त आज सामुदायिक प्रहरी बिटम हुनुहुन्थ्यो नि! निकै हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो । के हो ? होस गर्नुस है । आईमाई मान्छे यसरी खुलस्त भएको राम्रो संकेत हैन । ” छिमेकमा बस्ने शिवको यस्तो चाप्लुसी एवं स्वार्थले भरिएको कुरा सुनेर रमेशमा आगोमा घिउ थपिने काम भएको थियो ।
“रमेशजी होस गर्नुस है, भाउजू राम्री हुनुहुन्छ । फेरि उडाउँला नि कसैले हा!हा!हा! ” केही महिना यता सुनिदैँ आएको यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई पचाउँदै आएको रमेशलाई अब साँच्चैनै असह्य हुन थालेको थियो । जागिर अनि त्यसमाथि सामाजिक कार्यमा व्यस्त निशाको व्यवहार अनि अरूले सुनाएका भाँडभैलो कुराहरूले रमेशलाई घोत्लिएर सोच्न बाध्य बनाउँदै लगेको थियो ।
“निशा आज सिनेमा हेर्न जाऔ है, हिजो अफिसमा साथीहरूले च्यारिटी-सोको टिकट ल्याएका रहेछन् । मैलेपनि दुईवटा ल्याएँ ।” रमेशको यो प्रस्ताव शनिवार छुट्टीको दिन हुदाँहुदै पनि निशाले सहर्ष स्वीकार्न सकिन, “ओहो! हिजो अस्ति भन्नुभएन । आज त रोटरी क्लबको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति भएर जानुपर्ने छ । के गर्ने ? अरु कुनै दिन जाउँला नि हुन्न ? ”
निशाको कुरा सुनेर रमेशले चुपचाप हुन्छ भनेर टाउको मात्रै हल्लायो । निशा केही बेरपछि बाहिर निस्किन् । रमेश भने खाटमा पल्टियो । नानाभाँतीका तर्कनामा रमेश हराउन थालेको थियो ।
“निशा किन मलाई समय दिन्न ? मैले चाहेको समयमा म किन उसलाई पाउँदिन ? के साच्चै नै बाहिर चलेको हल्ला जस्तै निशा घर बाहिरकै दुनियाँमा हराउन थालेकी हुन् वा मसँग समय व्यतित गर्न चाहन्न । पक्कै पनि निशाको कुनै नाजायज सम्बन्ध स्थापित भएकै हुनुपर्छ । हैन भने मेरो हरेक प्रस्ताव किन सहर्ष स्वीकार्दिन ? ” रमेश यस्तै बेतुकका तर्कनामा विलिन हुन थालेको थियो ।
रमेशसँग निशाको प्रश्नको रेडिमेट उत्तर थियो, “तिमी मसँग खुसी छैनौ, मलाई थाहा छ । त्यसैले म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन चाहन्छु । यो डिभोर्सको कागजातहरू हो । हस्ताक्षर गर ।” यति भनेर रमेश बाहिर निस्कियो ।
निशाले पुरै ब्रम्हाण्ड नै आफूमाथि खनिएझैं महशुस गरिन् । रमेशसँग जीवनका हरेक खुड्किलाहरूसँगै उक्लने सपना बोकेकी निशा अब कसैले त्यो शिशा फुटाएझैं चक्नाचुर पार्न खोजे जस्तै आभास गर्न पुगिन् । निशा चिच्याउन चाहन्थिन् तर आवज भित्र-भित्रै दबिएको भान हुदैँ थियो । गला अबरुद्द भएको थियो ।
कोठामा मुर्दा शान्तिले साम्राज्य जमाएको थियो । निशा प्रश्न गर्न चाहन्थिन्, कहाँ नेर उनको गल्ती भयो जीवन जिउने क्रममा । उनी भित्रै-भित्रै गल्दै थिइन् । उनी “मेरो गल्तीहरू स्पष्ट पार” भन्न खोज्दै थिइन् तर उसको उत्तर दिने कोही थिएन । कसरी रमेशमा यस्ता गलत सोचाईहरू आयो ? किन शंकाको डोरीले कस्सिएर बाँधियो रमेश ? के साँच्चै नै मैले दिने मायामा कमी भएकै हो त ?
म कहाँ चुकेछु ? सबैभन्दा भाग्यमानी अनुभव गरिरहेकी म भ्रममा पो रहेछु त ? कसरी रमेश मेरो लागि बाधक भयो ? म रमेशसँग खुसी छैन रे ? के मैले नै गल्तीहरू गरेको हुँ त ? अहो! मैले रमेशको ईच्छा, मनोकांक्षाहरू पुरा गर्न नसकेकै हुँ त ? म त आफूलाई सबैभन्दा परिपक्क र समझदार छु भन्ने सोच्थें तर हैन रहेछ कि क्या हो ? ” यस्ता अनगिन्ती प्रश्नले निशालाई रिङ्ग्याउँदै थियो । उनी मानसिक रुपले क्षतबिक्षत हुन थालेकी थिइन् ।
हार गुहार मागिन् तर रमेश टसमस भएको भएन । मानौं, ऊ बहिरो र लाटो भएको थियो । निशाले रमेशसंग डिभोर्स भएपछि जीवनका पछिल्ला चार घुम्तीहरू पार गरिसकेको थियो । मार्च ८ अर्थात नारी दिवसको दिन थियो । निशा महिला आयोगले आयोजना गरेको अन्तरकृयात्मक गोष्ठीमा सहभागी हुन पुरानो बसपार्क हुदैँ सिहंदरबारतिर जाँदै थिइन् । बिहानको ९ बजिसकेको थियो ।
सडकमा सवारीसाधनको भीड थियो, अनि त्यसमाथि जाम भएको थियो । निकै बेरसम्म पनि बाटो नखुलेपछि निशा गाडीबाट ओर्लिएर अगाडि पुगिन् । निकै भीड देखेर के रहेछ भन्दै भीडको बीचमा हेर्न थालिन् ।
भावविह्वल हुदै रमेशको शरीरमाथि घोप्टो परेर आफ्ना वेदनाहरू आशुँको रुपमा छताछुल्ल पारेर पोखन थालिन् । केही बेरपछि आफूलाई सम्हाल्दै रमेशलाई बीर अस्पताल पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाइन् ।
“तपाँईको बिरामी अहिले सामान्य अवस्थामा छ तर ऊ शारीरिक रुपलेभन्दा पनि बढी मानसिक रुपमा अशक्त भएको हुदाँ तत्कालको लागि औषधीभन्दा पनि माया, स्नेह, प्रेमले नै सन्चो हुन्छ । ” डक्टरको यस्तो कुरा सुनेर निशा स्तब्ध भएकी थिइन् । निकैबेर सोचेपछि निशाले
शनिबारकै दिन थियो । रमेश चट्ट दाह्री, कपाल काटेर निकै रमाईलो मनस्थितिमा देखिन्थ्यो । निशा पनि भर्खर नुहाएर चिसै कपाल फिजाँउदै आइपुगेकी थिइन् । रमेशले कुरा निकाल्यो, “निशा थाहा छैन तिमीले मलाई माफ गर्यौ कि गरेनौ ? तर पनि मेरो तिमीसँग एउटा विन्ती छ । म ती वितेका दुखद पलहरूको सट्टामा खुसी दिन सक्छु सक्दिन । त्यो त मलाई ज्ञान छैन । तै पनि मलाई माफीको लायक देख्छौ भने मेरो एउटा अनुरोध छ । त्यो स्वीकार्ने नस्वीकार्ने तिम्रै हातमा छ । के तिमी मसँग पुर्नजीवन व्यतित गर्न तयार छौ ? ” निशा एकतमासले रमेशलाई हेरिरहन्छिन्, हेरिरहन्छिन् । निशा अनुत्तरित हुन्छिन् । उनी कतै भावनामा विलिन हुनपुग्छिन् । अनन्त गहिराईमा ।source:nepalexpress